Efa vonona hanolo-tena A Pet?
Last nohavaozina: Jul. 16 2019 | 2 min namaky
Zavatra Voamariko fony amin'ny oniversite dia ny habetsaky ny olona fantatro nividy sy / na halanao biby fiompy. Nanana namana aho sy ny olom-pantatra izay rehetra mahazo ny biby fiompy isan-karazany nandritra ny taona maro taorian'ny fianarana ambaratonga faharoa-saka, alika, vorona, trondro, bitro, ny sokina ary na dia vilany kibony kisoa.
Mety ho toa tena dalàna ny lany ka mahazo biby fa ianao mieritreritra ny amin'ny fanoloran-tena izay tonga niaraka tamin'ny biby? Eny, ny biby amin'ny fitiavana tsy misy fepetra, ary ho any ho anareo mandritra ny avo rehetra sy ny iva eo amin'ny fiainana, fa izy ireo no tena mitaky kely ny fikarakarana. Ireto misy toro-hevitra vitsivitsy mba hanampy anao hanapa-kevitra raha toa ka vonona:
Biby fiompy dia fanoloran-tena ara-bola
Ny sasany dia mety ho biby fiompy vidiny ambany dia ambany sy ny biby fiompy sasany dia afaka manomboka amin'ny vidiny ambany dia ambany, fa hatrany vidin'izany harena kely ianao. Nandritra ny taona maro, ny alika efa somary mora fikojakojana. Izy no alika kely, ka ny sakafo dia kely sotroiko ary mahalana maintsy hitsidika ny vet. Na izany aza, izy efa ho 15 ary ankehitriny be taona sy ny marary. Ny fanafody lafo ny sandriny sy ny tongony isam-bolana. Toy ny olombelona, biby marary na inona na inona ny taona, na ny fomba fiainany. Azonao manam-bola ny akorany ny vola, ary koa ny fotoana noho ny biby? Izany no zavatra iray izay tokony ho heverina.
Biby fiompy dia fotoana fanoloran-tena
Raha biby fiompy sasany dia lazaina fa "ambany fikojakojana" dia mbola mila fotoana nataony ho azy ireo isan'andro. Sakafo, taovolo sy ny fanatanjahan-tena dia zavatra vitsivitsy fotsiny mba handinika raha ny amin'ny isan'andro mikarakara ny biby. Raha toa ianao ka mandeha foana, na mandany fotoana bebe kokoa any am-pianarana na ao an-trano asa avy eo, Mety ho hevitra tsara ny hanao ny fahazoana ny biby eny amin'izao fotoana. Mety ho lasa enta-mavesatra ho an'ny hafa raha toa ianao ka manontany foana izy ireo mba Pet-mipetraka ny biby raha lavitra anao. Angamba rehefa kokoa ny fiainanao lasa nanorim-ponenana voalohany no ho fotoana hahazo biby.
Biby fiompy dia fanoloran-tena maharitra
Na dia ny biby mety mifanaraka ny fomba fiainantsika dieny izao, dia izy ireo taona manaraka? Amin'ny 5 taona? Amin'ny 10 taona? Azoko tsara ny faniriana ny hahazo ny biby, fa ny fanekena fa ny biby dia fanoloran-tena maharitra dia ilaina. Maro ny olona fantatro izay nanana biby fiompy maintsy nanome azy ireo tatỳ aoriana nidina ny lalana izy ireo, satria tsy afaka mikarakara azy ireo intsony. Izy ireo fa ny biby any an-tsekoly, fa raha vao nahazo diplaoma, ary nifindra tany amin'ny tanàna vaovao na trano tsy afaka ny hitondra ny biby miaraka aminy. Izany dia fanapahan-kevitra tsy misy olona te hanao, manana ny misaraka amin'ny biby malalany, na amin'ny fotoana voafetra na tanteraka. Toy izany koa ny fotoana fanoloran-tena, angamba tokony hiandry ny fiainanao dia tsy kely somebiseby erỳ.
Izany alohan'ny ka mandany ny biby, manao ny fikarohana, ary mieritreritra momba ny drafitra amin'ny ho avy. Jereo any amin'ny karazana biby tianao, ny zavatra takiana mba hikarakara araka ny tokony ho izy ireo sy ireo zavatra takiana raha mifanaraka ny fiainana amin'izao fotoana izao. Tsy misy maha ratsy ny fahazoana naharitra ela ny biby mandra-pahafaky ny vonona, ka tsy maika ny fanapahan-kevitra.
4 Soso-kevitra ho Date Voalohany